DAAWO: Kooxda Barcelona oo guul ka gaartay dhigeeda Atletico Madrid. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
DAAWO: Kooxda Barcelona oo guul ka gaartay dhigeeda Atletico Madrid.
By admin on 07/04/2019 No Comment
Axad, April, 07, 2019 (HNN)- Kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Ateltico Madrid oo ku ciyaareysay 10-xidig iyaga oona ugu adkaaday 2-0 oo yimid waqtigii ugu dambeeyey ee ciyaarta .
Bilowgii hore ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan ayaa ku soo dhamaatay bar-baro gool la’aan ah , wallow Kooxda Barcelona ay itaal rooneed dhigeeda kooxda Caasimada ka dhisan madaama ay ku ciyarayeen 10-xidig.
Weeraryahanka dabciga xun ee kooxda Atletico Madrid ee Diego Costa ayaa muteestay calaamada casaanka kadiib markii uu si qaldan ula hadlay xaakimkii ciayaara daqaiiqadii 28-aad ee ciyaarta .
Barcelona oo fursad weyn u arakta in Atletico ay 10-xidig ku ciyaareyso aya weerar is daba jog ah ku qaaday shabaqa kooxda Madrid , lkn gool haye Jan Oblak ayaa ka hor istaagay in Barca wax gool ah ay dhaliso qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Ugu dambeen kulan ciyareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo dhamaaday 0-0 , waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid xiiso badan .
Kooxda Barcelona ayaa dar dar xoogan ku soo gashay qeebtii dambe ee ciyaarta iyaga oo ay ka go’need in ay helaan goolka koowaad ee ciyaarta balse gool haye Oblak ayaa sameenayey bad baadin cajiib ah .
Isku day walba oo ay sameeso kooxda Barcelona ayaa la timid labo goo loo deg deg ah dhamaadkii ciyaarta , gool hore ee oo yimid daqiiqadii 85-aad ee ciyaarta waxaa dhalieyey Luis Suarez , labo daqiiqo kaddib waxa yimid goolkii niyada ka sii dilay ciyaartoyda Madriid iyo taageerayaashooda kaas oo uu dhaliyey Lionel Messi oo fariin u sii dariya taageerayaasha Kooxda Manchester United oo ay ku balansanyihiin tartanka Champions League maalinimada Arbacada .
ugu dambeen nataajiada ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 2-0 oo ay guushu ku raacday Kooxda Barcelona oo si nayadsami ku dheehantahay ku wajihi doona kooxda Manchester United .
DAAWO: Kooxda Barcelona oo guul ka gaartay dhigeeda Atletico Madrid. added by admin on 07/04/2019